ထိုင်းနှင့်တရုတ် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သ?? - Yangon Media Group
ထိုင်းနှင့်တရုတ် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သ??
ဘန်ကောက်၊ ဩဂုတ် ၂၆ – တရုတ်နှင့်ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံတို့ သည် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများတွင် ဒေါ် လာဘီလီယံ ၁၄၀ အထိရောက်ရှိ စေရန် မဟာဗျူဟာကျ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် တရုတ်ကိုယ် စားလှယ်ဝမ်ယွန်နှင့် ထိုင်းသမ္မတ ရုံးဝန်ကြီး ကော့ဘ်ဆတ်ပူထရပ် ကူးလ်တို့ သဘောတူညီခဲ့ကြသည် ဟု ဩဂုတ် ၂၆ ရက်သတင်းများအ ရ သိရသည်။
ယင်းသို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏အရှေ့ဘက်စီးပွားရေးစင်္ကြံအစီ အစဉ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏လမ်းတစ် လမ်းရပ်ဝန်းတစ်ခုအစီအစဉ်များ အား မျှတစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားရန်လိုအပ်သည်ဟု တရုတ် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဖြစ် သူ ဝမ်ယွန်က ထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်သည်။
ထိုင်းနှင့် တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတို့ သည် သံတမန်ဆက်သွယ်ထူထောင် ထားရှိပြီးသော ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ယခုထက် ပိုမိုတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရန် အကူအညီပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဖျားစီးပွားရေး စင်္ကြံအစီအစဉ် အောင်မြင်သည် အထိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ လမ်းတစ် လမ်းရပ်ဝန်းတစ်ခုအစီအစဉ်က ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဟု လည်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆို လိုက်သည်။ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်များကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ယင်းအစီအစဉ်ကို စိတ်ပါဝင်စား ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် စိတ် ဝင်စားနေကြသည်။
]]တရုတ်နိုင်ငံဟာ အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနဲ့ လည်း အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ် သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက် အောက်မှာ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြ ရန် စိတ်ပါဝင်စားနေကြပါတယ်။ နည်းလမ်းသစ်များလည်း ရှာကြံနေ ကြပါတယ်}}ဟု ဝမ်ယွန်က ဆက် လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ သည် ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရေးနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုကောင်စီ၏ (၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေး ၂၀၁၈ ခု နှစ်ဖိုရမ်တို့အားလည်း ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မြေနေရာရရှိရေးသည် အဓိကအဟန့်အတားဖြစ်လျက
၂၀၁၈ နိုင်ငံတကာသင်္ချာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့် ၈၅ ရရှိသည့်အတွက် အောင်မြင်မ
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိမိတ်ဆောင် ကမာကူရ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီ ထီးေ?
”ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တစ်ကားက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်မသိပေမယ့် အရမ်း??
အိမ်နံပါတ်များကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း စနစ်တကျ သတ်မှတ်နိုင်ရန် နည်းပညာရှင်များနှင့်